WAR FIICAN: Nin gacan ku dhiigle ah oo horey nin ganacsade caan ah ugu dilay Qardho oo laga soo qabtay dalka Yemen + Magaciisa | HalQaran.com
Home Wararka Maanta WAR FIICAN: Nin gacan ku dhiigle ah oo horey nin ganacsade caan...
WAR FIICAN: Nin gacan ku dhiigle ah oo horey nin ganacsade caan ah ugu dilay Qardho oo laga soo qabtay dalka Yemen + Magaciisa
Magaalada Qardho ee gobolka Karkaar / Sawir Google
Qardho (Halqaran.com) – Waxaa dalka Yemen laga soo qabtay nin ganacsade caan ahaay ku dilay Magaalada Qardho ee Gobolka Karkaar, kadib markii ninkaasi uu u baxsaday dalkaasi Yemen.
Safiirka Dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Yemen, Cabdulaahi Xaashi Shuuriye ayaa xalay saqdii dhexe wuxuu dakedda Magaalada Boosaaso ka dajiyay ninka dilka ganacsadaha ku eedeysan iyo 30 ruux oo Qaxooti ku ahaay dalka Yemen oo Safaarada ay u fududeysay dib ugu laabashada Soomaaliya.
Ninka Yemen laga soo qabtay ayaa lagu magacabaa Maxamed Cabdullaahi oo ku eedaysan dilkii ganacsade Dirir Cabdi Gufure oo 20-July-2019 lagu dilay magaalada Qardho ee gobolka karkaar.
Qoyska dhalay eedaysanaha oo kaashanayaa safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Yemen, ayaa ku guulaystay in ay ninkaasi ka soo qabtaan gudaha dalka Yemen kadib mudda bil ah oo la raadinayey, waxaana ay xalay ku soo wareejiyeen dowladda Puntland.
Safiirka Soomaaliya ee dalka Yemen ayaa ninkaasi waxa uu ku wareejiyay Wasiiru dowlaha arrimaha gudaha Puntland, Guddoomiyaha Gobolka Bari iyo Taliyaha qaybta Booliska Gobolkaasi Bari.
Ugu dambeyn, mas’uuliyiinta maamulka Puntland ayaa safiirka uga mahadceliyay, sida uu gacanta uga gaystay soo qabashada ninka ku eedaysan dilkii ganacsade Dirir Cabdi Gufure iyo sidoo kale caawinta Qaxootiga Soomaaliyeed ee ka soo laabtay dalkaasi Yemen.
Dirir Cabdi Gufure
ku dilay Qardho
lagu soo qabtay
Nin gacansade caan ah